Quantity Survyer Archives - Glory Assumption Space
Quality Surveyor – Male / Female (5) Posts / လစာ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောConstruction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Quality Surveyor – Male / Female (5) Posts / လစာ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- Between 25 to 35 years - Any Graduate - English4Skills (Good / Fair) - Must be at last3years in (Decoration & Construction field) - Must be prepare self by Tender & Contract documents. - Must be estimate minimize project cost. - Must be interest building construction and renovation business. - Must have fully knowledge Decoration & Construction concept - Must be work teamwork. - Good Communication skills. Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Surveyor ( Road & Bridge )
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ ဗဟန်း မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ 1. Surveyor ( Road & Bridge ) Male ( 10 ) Posts B.Sc ( Geology ) Minimum (3) years experiences in Road & Bridge project Able to use survey Instruments Able to work at site location Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
((((((((((((((URGENT POSITION ))))))))))))))) လှိုင် မြို့နယ်တွင်ရှိသော GAS နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,Ltd တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိပါသည်။ Quantity Survyer Female (5) posts --- BE , B Tech , AGTI (Civil) ဘွဲ့ရ။ --- Quantity Survyer Experience (5) Year Above. --- လစာ (5) သိန်း နှင့် အထက်။ --- နယ်ခရီးသွားနိူင်သူ ဖြစ်ရမည်။
အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Phone No.-09-262223783 ,09-970539386, 09 262223785
ရုံးလိပ်စာ (၁) - တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ရုံးလိပ်စာ (၂) – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။